Jurgen Klopp oo xidig muhiim ah ka doonaya kooxda Bayern Munich – Gool FM
Vinícius Jr oo guul muuhiim ah farta ka saaray Real Madrid kaddib markii ay ka adkaadeen kooxda Sevilla… +SAWIRRO
Shaxda rasmiga ah kulanka adag Kooxaha Real Madrid iyo Sevilla ee horyaalka La Liga oo la shaaciyey
Kooxaha Chelsea iyo Manchester United oo dhibcaha ku qeybsaday garoonka Stamford Bridge… +SAWIRRO
Man City oo garoonkeeda Etihad saddexda dhincood kaga qaadatay kooxda West Ham… +SAWIRRO
Shaxda rasmiga ah kulanka adag Kooxaha Chelsea iyo Man United ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey
Pep Guardiola oo ka hadlay mustaqbalkiisa Tababarennimo… (Miyuu doonayaa inuu layliyo koox kale oo Ingiriis ah?)
Wax ka ogow noloshii adkeyd ee Goolhayaha Kooxda Chelsea Edouard Mendy… (Maxaa ka jira inuu Yaanyo goobeyn jiray? Mise la socotaa in Wakiilkiisu uu Taleefanka ku dhegeystay?)
Kooxda Manchester United oo aaminsan in Macallin Ralf Rangnick uu u soo gacan gelin karo Erling Haaland
Agaasimaha kubadda cagta Barcelona oo ku sugan magaalada Manchester isagoo wada-xaajood kula jira labada naadi ee United iyo City… (Waa kuwee xiddigaha uu mid walba ka doonayo?)
Horudhac: Real Madrid vs Sevilla… (Xiddig muhiim ah oo kusoo laabtay safka Los Blancos & Rikoorrada is-araggan))
Jurgen Klopp oo xidig muhiim ah ka doonaya kooxda Bayern Munich
Dajiye May 31, 2018
(Liverpool) 31 Maajo 2018. Macalinka reer Germany ee kooxda Liverpool Jürgen Klopp ayaa doonaya inuu lasoo saxiixdo xidig ka tirsan safka kooxda Bayern Munich, inta uu furan yahay suuqa xagaaga.
Sida uu shaaciyay wargeyska “Bild” ee dalka Germany Jürgen Klopp Jérôme ayaa wuxuu xiiseenayaa in Bayern Munich uu kala soo saxiixdo difaacooda ugu muhiimsan ee Jérôme Boateng, si uu ugu xoojisto difaaca kooxdiisa.
Wargeyska ayaa tilmaamay in kooxda ay dooneyso daafac adag oo ka garab ciyaara Virgil van Dijk, si ay u wada ciyaaraan xili ciyaareedka cusub ee soo aadan.
Laakiin kooxda Bayern Munich ayaa la fahansan yahay in aysan si fudud u ogolaan doonin in uu kooxda ka dhaqaaqo difaaca xulka qaranka Germany ee Jérôme Boateng.
Waxaa suuragal ah in uu Jérôme Boateng kaga dhaqaaqo Bayern Munich aduun lacageed gaarsiisan 40 milyan oo ginni, wuxuu heystaa khibrad ku aadan horyaalka England maadaama uu horey u soo maray kooxda Manchester City.
Didier Deschamps oo bixiyay qish ku aadan shaqada la filayo inuu qaban doono Zinedine Zidane
Sami Khedira: “Waxaan ku dhawaaday inaan ka fariisto kubada cagta”